Amaholide noma umsebenzi obheke olwandle
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-RaKel
U-RaKel Ungumbungazi ovelele
Ifulethi elilungiswe ngokuphelele (75m2) odongeni lolwandle lweLa Panne elinombono omangalisayo wangaphambili wolwandle. Izinyathelo ezimbalwa kuphela ukusuka enkabeni nasezindundumeni, kuyindawo engenakulibaleka ekucindezelekeni kwansuku zonke. Ikheshi lizokuholela esitezi sesi-7 lapho igumbi lokuhlala lesimanje, ikhishi elivulekile elihlome ngokuphelele, igumbi lokugezela lesimanje kanye namakamelo okulala amnandi azokumangaza. I-South terrace ngemuva iqedela ifulethi. Amashidi namathawula okugeza ayatholakala”
Ukufinyelela okuqondile olwandle, eduze nesikhungo kanye nezitolo zokudlela. I-Surf club engumakhelwane. Awudingi imoto ukuze uhambe, yonke into ingaphakathi kwebanga lokuhamba ngezinyawo. Imoto ingapakwa ezindaweni zokupaka izimoto zomphakathi lapho igaraji elizimele lingatholakala eduze ngentengo emaphakathi.
4.96 ·47 okushiwo abanye
Indawo ephilayo, kodwa ifulethi likude nomsindo ngenxa yokuphakama kwalo. Isitezi sesi-7 kuthulile emkhathini. Kusuka endaweni ebheke eningizimu ungabuka isifunda saseDumont, igugu langempela lefa lezakhiwo, eliqhele ngebanga elivela efulethini lethu futhi livakashelwe ngaphandle kokulinganisela. Kodwa akugcini lapho, iLa Panne izungezwe amabhishi amahle, izindawo zokulondoloza imvelo ezifinyeleleka ngezinyawo noma ngebhayisikili ukusuka efulethini, kanye nenethiwekhi yokuhamba kuwo wonke amazinga.
URaKel Ungumbungazi ovelele